Play Knight Shot HTML5 ဘရောက်ဇာဂိမ်း
အလျင်အမြန် ဝင်ရောက်မှုများအတွက် အောက်တွင်ပါဝင်သည့် သင်၏ အလျင်အမြန် ချိတ်ဆက်ရန် ကုဒ်နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပါ -
ကုဒ်ကို ထည့်ပါ - လော့ဂျအင်
သင်၏စကားဝှက်ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးပါပြီ။သင်၏စကားဝှက်အသစ်အား သင့်ထံသို့ ပို့ပြီးပါပြီ။
အောင်မြင်စွာ လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီးပါပြီ။ ခဏစောင့်ပါ...
သင်၏ အသက်ကြောင့် ဤဆိုက်ပေါ်တွင် ဂိမ်းများကစားရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှိပါ။ မှားယွင်းမှုတစ်ခုဟု သင်ယူဆပါက ဤဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၏ အောက်ခြေရှိ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါကို အသုံးပြုပါ။
ဦးစားပေး ဖော်ပြထားသော ဂိမ်းများ
Afrikaans اللغة العربية Deutsch English Español فارسی Français ဗမာစကာ Português Русский isiXhosa isiZulu
kizi benefits tinb christmas 2048
လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်ခြင်း / မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခပေး စာရင်းသွင်းထားခြင်းကို သင်ပယ်ဖျက်လိုသည်မှာ သေချာပါသလား။
Casual Games Knight Shot
Protect the kingdom from evil creatures by pushing them off the edges of the stage. Don't fall off the edge and die or else you must start over. Collect coins to buildashrine that can help protect your kingdom.
Click on the screen and drag till the arrow faces the right direction. Try push your opponent off the platform without you falling off. Collectacertain amount of coins to build your shrine for each level.
ကုန်ကျစရိတ် -0Credits
ရရှိသည်0Credits
မြင့်မားသော အမှတ် - Yes
ဝယ်ယူမှုများ - No
မှားယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်မှ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ နောက်မှ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Copyright GLive - GameZBoost Live for Live Stream | Games | Tournaments | Prizes | Rewards
ပံ့ပိုးထားသူ - GameZBoost!
= အမှတ်များသော ဂိမ်း
- ဤဂိမ်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် highscores နှင့်အတူတစ်ဦးဦးဆောင်သူရှိပါတယ်
= ရမှတ်များ သိမ်းဆည်းရန် လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ
- သင်ရမှတ်ကယ်ဖို့အတွက် logged ခံရဖို့လိုအပ်
= စွဲမြဲစွာ ဆော့ကစားသော အဆင့်
= စွဲမြဲစွာ ဆော့ကစားသောဆု
= စွဲမြဲစွာ ဆော့ကစားသော ရမှတ်များ
= Android ဂိမ်း
- ဂိမ်း Android ဖုန်းများအတွက်အားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
= iOS ဂိမ်း
- ဂိမ်းကို Apple က iOS ဖုန်းများအတွက်အားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
- ဂိမ်း Desktop ကိုဖုန်းများအတွက်အပေါ်ကစားနိုင်ပါတယ်
- ဤ Site တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်ညွှန်ပြ
အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမှတ်များ ရယူလိုက်ပါ -
ဂိမ်းကို အမှတ်ပေးလိုက်ပါ =2points (max5တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆို နေ့စဉ်ရက်စက် ကစားလိုက်ပါ = 1 ရမှတ် / ဂိမ်း
ကစားသမားတစ်ယောက်တည်း ဆော့ရသော ဂိမ်းများကို ကစားပါ = 1 ဂိမ်းတစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး5တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
Play Multiplayer games =2ဂိမ်းတစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး5တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အမှတ်တစ်ခု တင်သွင်းပါ = 90 ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး 200 တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
ပြိုင်ပွဲတစ်ခု အနိုင်ရသည် =2ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ
ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖန်တီးမည် = 10 ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး0တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
မြင့်မားသောရမှတ်တစ်ခုကို တင်သွင်းပါ =2မြင့်မားသောရမှတ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး5တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
လူမှုရေးဆိုင်ရာ မျှဝေမှု =5မျှဝေမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး0တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
စစ်တမ်းများနှင့် သဘောထားကောက်ခံမှုများ =3အုပ်စုတစ်စုချင်းစီအတွက် ရမှတ်များ (အမြင့်ဆုံး3တစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
အောင်မြင်သော ဝယ်ယူမှု = 1 ဝယ်ယူမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရမှတ်များ
သူငယ်ချင်းများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း =2အောင်မြင်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်း တစ်ခုစီ၏ ရမှတ်များ
မှတ်ပုံတင်ပါ = 1 ရမှတ် (တစ်ကြိမ်)
ဤဆိုက်သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူလိုက်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် သင်ဖတ်ရှုရမည့် အကြောင်းအရာ - ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ. အိုကေ